यी हुन् आमा बनेका नेपाली १० नायिका – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/यी हुन् आमा बनेका नेपाली १० नायिका
आमा बनेपछि महिलाहरुमा ठूलो शारिरीक परिवर्तन देखिने भएकाले उनीहरुले आफूलाई मेन्टेन गर्दै फिल्ममा ‘कमब्याक’ गर्नु अझ चुनौतीपूर्ण हुने गर्छ । तर, संसारमा केही हिरोइनहरुका यस्ता पनि छन् । जसको फिल्मी करिअर आमा बन्नुअघि र आमा बनिसकेपछि पनि कुनै परिवर्तन आएको पाइदैंन् ।
नेपालमा भने हिरोइन आमा बनेपछि फिल्ममा फर्किने कम छन् । कतिपय हिरोइनहरु आमा बनेपछि पनि निरन्तर नेपाली फिल्ममा सक्रिय त भएका छन् तर उनीहरुमध्ये धेरै कमले मात्र सुखद् नतिजा हात पारेका छन् । नेपाली सिने जगतमा लामो समय चर्चा बटुलेका धेरै हिरोइनहरु आमा बनेका छन् ।
तीमध्ये आमा बनेका नेपाली हिरोइन –**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
सन् १९८१ मा जन्मिएकी झरना थापा नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी अर्की सुन्दरी र चर्चित नायिका हुन् । प्युठान स्थायी घर भएकी झरना बिहेपछि चर्चा बटुलेकी सम्भवतः एकमात्र नायिका हुन् । ख ‘दाइजो’ चलचित्रमा काम गर्दागर्दै उनले सुनिलकुमार थापासँग सन् १९९८ मा प्रेम विवाह गरेकी थिइन । यी नायिकाले विवाहको अर्को वर्ष नै सुहानालाई जन्म दिइन । सुहाना अहिले २० वर्षकी भइन ।
उनको हिट बनेको फिल्म ‘ए मेरो हजुर’को सिक्वेलमा उनले अर्कै हिरोइनलाई अनुबन्ध गरेकी छिन् । झरना त्यो फिल्ममा निर्देशकका रुपमा देखिएकी छिन् । उनी निर्देशक बनेकी सिनेमा ‘ए मेरो हजुर २’ होम प्रोडक्सन चलचित्र हो ।
कुनै समय आफ्नो सुन्दरताकै कारण चर्चाको शिखरमा थिइन—नायिका सञ्चिता लुइटेल । उनको फिल्म र अभिनय दुवैले राम्रै चर्चा र तारिफ बटुलेको थियो । सन् १९९९ मा ‘अप्सरा’बाट नेपाली फिल्ममा डेब्यु गरेकी सञ्चिताले ‘आर्शिवाद’, ‘मुनामदन’, ‘छोडिगए पाप लाग्ला’, ‘दासढुंगा’, ‘पर्खि राख है’, ‘कालापानी’, ‘इन्द्रेणी’, ‘कोही मेरो’, ‘दाग’, ‘बन्दी’लगायतका सिनेमामा अभिनय गरेकी छिन् ।
सन् २०१० मा सञ्चिताले सन् २००२ मा ‘पिजडा’बाट डेब्यु गरेका नायक निखिल उप्रेतीसँग विवाह गरिन् । त्यसअघिको पहिलो विवाह भने असफल भएको थियो । निखिलसँग विवाह गरेको एकवर्षपछि सन् २०११ को साउनमा उनले पहिलो सन्तानका रुपमा छोरा जन्माइन । त्यस लगतै उनी अर्को सन्तानकी आमा बनिन् । महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट मानिएको निर्देशक योगेश घिमिरेको ‘राधा’बाट सञ्चिता फेरि उपस्थित भएकि हुन् ।
कुनै समयकी चर्चित नायिका हुन्—मेलिना मानन्धर । सन् १९९३ मा ‘मिलन’ फिल्मबाट नेपाली रजटपटमा उदाएकी यी नायिकाले त्यसपछि दर्जनौं फिल्ममा अभिनय गरिन् । ८ वर्षअघि जापानबाट फर्किएका मुकेश ढकालसँग प्रेम विवाह गरेकी हुन्, उनले । विहेपछि उनले पति मुकेशसँगै ‘हलचल’ फिल्ममा काम गरिन् । ‘सीमाना’, ‘अपराध’ ‘जाली रुमाल’, ‘बन्धन’, ‘दाइजो’ ‘रानीखोला’, ‘प्रियसी’, ‘माटो बोल्छ’, ‘मामाघर’ ‘अर्पण’ ‘छोराबुहारी’ ‘संगम’ ‘ज्वा-लामुखी’जस्ता फिल्ममा काम गरेकी मेलिनाको रुप, नृत्य र अभिनयको खुबै तारिफ हुन्थ्यो ।
मेलिना ‘करुणा’ नामक टेलिश्रृखलाबाट पनि चर्चा बटुल्न सफल नायिका हुन् । ३९ वर्षीया यी नायिकाले आफै निर्माता बनेर ‘ज्वालामुखी’ सिनेमा निर्माण गरेकी थिइन । मेलिनाले विवाहको अर्को वर्ष २८ कात्तिक २०६७ मा पहिलो सन्तानका रुपमा छोरी मेलिस्कालाई जन्म दिएकी हुन् । आमा बनेको डेढ वर्षपछि उनले एक नेवारी फिल्ममार्फत कमब्याकको प्रयास गरेपनि त्यसपछि सिनेमामा देखिएकी छैनन् ।
सुष्मिता बम्जन कुनै समयकी नेपालकी गनिएकी हिरोइनमा हुन् । दार्जिलिङमा जन्मिएकी यी नायिकाको चर्चा त्यतिबेला चुलियो जब उनी भुवन केसीकी दोस्रो पत्नी बनिन् । ‘नेपालीबाबु’, ‘त तँ साह्रै बिग्रिस नि बद्री’, ‘सुपर स्टार’, ‘तिमी बिना मरिहाल्छु नि’जस्ता सिनेमामा देखिएकी यी नायिका भुवन केसीसँग विवाह पछि सुष्मिता केसीका नामले चिनिन् थालिन् । भुवन र सुष्मिताका अहिले छोरा अनमोल केसी हुन् । आपसी विवादपछि अहिले सुष्मिता र भुवन अलग—अलग बस्दैं आएका छन् । यो जोडीका छोरा अनमोल केसी भने अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेका युवा स्टार नायक हुन् ।
आमा बनेपछि सुष्मिताले आफ्ना छोरा अनमोलको नाममा अनमोल क्रियसन नामक फिल्म निर्माण कम्पनी दर्ता गरेर फिल्म निर्माणमा सक्रिय बनेकी छिन् । उनले यही ब्यानरमा ‘म त तिम्रै हो’ भन्ने सिनेमा निर्माण गरिसकेकी छिन् ।
उनको केही समय पहिले रिलिज भएको सिनेमा ‘फागु’ ब्यापारिक रुपमा खासै सफल हुन सकेन । तर, ४६ वर्षीया करिष्माको अहिले नेपाली फिल्म नगरीमा उतिकै चर्चा हुने गरेको छ ।
कुनै समय नेपाली सिने नगरीमा खुबै रुचाइएकी नायिका थिइन्, विपना थापा । ‘जन्मभूमी’, ‘आगो’, ‘मितिनी’जस्ता हिट फिल्मकी यी नायिका विवाहपछि भने गुनमान छिन् । सन् २००८ मा भारतीय नागरिक आशुतोष भारद्वाजसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएकी विपनाले त्यसपछि पनि नेपाली फिल्म खेल्ने आशा धेरैले गरेका थिए ।
किनभने, उनको पति पनि नेपाली फिल्म निर्माणमा गर्थे । तर, विपना विहेलगतै श्रीमानको घर भारत गइन । विवाहको केही वर्षमै आमा बनेपछि भने विपनाको फिल्ममा कमब्याकको सम्भावना एकदमै फितलो बन्यो । गत वर्ष भूकम्पको राहत सामाग्री बोकेर नेपालमा माइती आएकी विपनाको अहिले नेपालको आवतजावत पनि निकै पातलो छ ।
३९ वर्षीया विपना नायिका त हुन नै उनी पेशाले फेसन डिजाइनर समेत हुन् । २०५३ सालमा ‘जन्मभूमी’ फिल्म खेलेपछि नेपाली रजतपटमा विपनाको चर्चा निरन्तर चलिरह्यो । त्यसपछि उनले ‘सहिद गेट’, ‘ख्यालख्यालैमा’, ‘मामा भान्जा’, ‘बरमाला’, ‘बेइमानी’, ‘राम बलराम’, ‘देवदूत’, ‘प्यारी बहिनी’, ‘जित’, ‘सगुन’, ‘अनाथ’, ‘शंकर’जस्ता चलचित्रमा पनि आफ्नो अभिनयको जादू देखाएकी थिइन् ।
अहिले उनका छोरा कुशाग्र स्कुल जाने उमेरका भइसके । उनले २०७२ वर्ष भूकम्पपछि नेपालमा राहत बाँडन आएका बेला भने आफूलाई अझै पनि नेपाली फिल्ममा फर्किने ठूलो इच्छा भएको बताएकी थिइन् । नेपाली फिल्ममा फर्किन कत्तिको मन छ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा विपनाले भनेकी छिन्, ‘एकदम धेरै मन छ । मेरो श्रीमान पनि नेपाली फिल्मको निर्माता हुनुहुन्छ । त्यही फिल्म बनाउने क्रममा भेट भएको हो । उहाँ पनि नेपाली फिल्ममा ‘कमब्याक’ भएको हेर्न रुचाउनुहुन्छ । तर, समय परिस्थितीले साथ दिएको छैन ।’
काठमाडौंमा जन्मिएकी ऋचा घिमिरे मोडलिङ, टेलिभिजन र म्युजिक भिडियो हुँदैं नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा भित्रिएकी हुन् । विं सं. २०६७ सालमा निर्देशक शंकर घिमिरेसँग ऋचा विवाह बन्धनमा बाँधिइन । त्यसपछि उनले सन् २०१२ मा पहिलो सन्तानलाई जन्म दिइन् ।
सञ्चारकर्मीका रुपमा कल कान्तिपुरलगायतका केही टेलिभिजन कार्यक्रममा समेत काम गरेकी माल्भिकाले लाइस्टाइल र फेशनसँग सम्बन्धित एक म्यागेजिनको प्रधान सम्पादकको जिम्मेवारी पनि सम्हालिन । माल्भिकाले वि.सं. २०६९ सालको बैशाखमा रियाज श्रेष्ठसँग प्रेम विवाह गरिन् । त्यसको ४ वर्षपछि गत २ बैशाख २०७३ मा उनले पहिलो सन्तानका रुपमा छोरा जाइर रिओ सुब्बालाई जन्म दिएकी हुन् । आमा बनिसकेपछि माल्भिकाले सिनेमामा पुनरागमन गर्छिन कि गर्दिनन् त्यो भने निश्चित भइसकेको छैन् । किनभने, अहिले उनी सन्तान हुर्काउनमा ब्यस्त छिन् ।
– झरना ब्रजाचार्य
पछिल्लो समयमा आमा बनेकी अर्की नायिका हुन्—झरना ब्रजाचार्य । उनले २८ चैत २०७२ मलेसियामा छोरा जन्माएकी हुन् । सन् २०१५ को मार्चमा भारतीय मूलका अमेरिकन ब्यवसायी राहुल अग्रवालसँग झरनाले लगनगाँठो कसेकी थिइन । उनी त्यसअघि नेपाली फिल्ममा सक्रिय रहेकी थिइन ।
सन् १९९७ की नेपाल सुन्दरी झरना नेपाली फिल्म दुनियाँमा सर्वाधिक आकर्षक नायिका मानिन्छिन् । उनले कुनै समय ‘म्युजिक भिडियो क्वीन’को छवि समेत बनाएकी थिइन । सन् १९९७ मा ‘हतियार’ सिनेमाबाट फिल्म क्षेत्रमा झरनाले डेब्यु गरेकी थिइन ।
उनले ‘लभ इन नेपाल’, ‘परेनी माया जालैमा’, ‘सिउदोको सिन्दुर’, ‘बादल पारी’, ‘कोही मेरो’लगायतका सिनेमामा अभिनय गरेकी छन । सन् १९८१ मा जन्मेकी झरनाले सिद्धार्थ बनस्थलीकी पढेकी हुन । सोसोलोजीमा डिग्री गरेकी झरनालाई वौद्धिक नायिका मानिन्छिन । ध्यान र पढ्न लेखनमा पनि उतिकै रुची भएकी नायिका हुन् । पहिलो सन्तान नै हुर्काइरहेकाले झरना पनि फिल्ममा कमब्याक हुने हुन वा होइनन् अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन ।